Tim Cook anotaura kunze zvine chekuita nerufu rwaGeorge Floyd uye achizivisa mimwe mipiro | Ndinobva mac
Kana ivo vakakukumbira iwe kuti utsanangure Apple CEO Tim Cook ane akati wandei zvipikisheni, zvirokwazvo mumwe wavo angave achisungwa. Kuzvipira kuzvikonzero zvinoda vane simba uye vane mukurumbira kuti vabudirire. Nyaya yeMinneapolis, kufa kwejaya jaya pamaoko emapurisa, kwakonzera kukanganiswa kwakanyanya mumigwagwa. Iwo mamwechetewo akamanikidza Apple kuvhara imwe yeApple Store yayo. Nekudaro, izvi ndizvo zvidiki kune kambani isingatsamiri pamari kuti urambe uchienda. Cook ave kubatanidzwa mune iyi nyaya yemhirizhonga yemadzinza kuna George Floyd, kutumira memo kune vashandi vako umo zvipo zvitsva uye kuzvipira kwakawanda kunoziviswa.
1 Tim Cook anozivisa zvipo zvitsva asi pamusoro pezvose anokumbira kunzwira tsitsi
2 Memorandamu yakazara nemanzwiro uye mhinduro kurufu rwaGeorge Floyd
Tim Cook anozivisa zvipo zvitsva asi pamusoro pezvose anokumbira kunzwira tsitsi
Kana Tim Cook, CEO weApple akadurura maonero ake pane imwe nhaurwa, tese tinoziva kuti ndiani anozviita haasi chero munhu. Haasi chimwe chinhu uye hapana chakaderera kupfuura musoro weimwe yemakambani ane simba kwazvo pasi. Naizvozvo, kana iwe uchitaura nezve chero chinhu chisiri Apple, iPhone kana One More Thing, tinofanira kungwarira, nekuti hazviwanzo.
Cook akabuda pachena pakuve munhu ane hanya izvo nguva dzose inomira kudivi revanonyanya kukuvara, achitarisa kurova kuna Donald Trump iye. Izvo zvadaro zvichidzivirira zvido zveboka re LGBTBY uye ikozvino zvadaro maererano ne Rufu rwaGeorge Floyd pamaoko emapurisa. Zvese zvinoratidza kuti rufu rwakaitika mushure mekunge mupurisa apfuura mabasa ake uye ivo vanotaura kuti chikonzero chikuru kusarura kwakadzika kuri kutonga munharaunda yeAmerica.
Neichi chikonzero, mhirizhonga yemumigwagwa iri kuitika (iyo iri kupfuudzwa) mukudzivirira rukudzo uye nechikumbiro cheruramisiro mukutarisana nerufu urwu. Vazhinji vanozivikanwa uye vane hunhu vakaratidza kuremekedza kwavo kumhuri yevakaurawa uye Tim Cook anoenderera mberi. Akanyora memorandamu kuvashandi veApple mune izvi. zvimwe chete inotanga nekubvuma kusimba kwemanzwiro izvo zvakakonzera kuratidzira kwakapararira muUnited States, uye kusaenzana kuri kuenderera ...
Memorandamu yakazara nemanzwiro uye mhinduro kurufu rwaGeorge Floyd
Parizvino, pane marwadzo akadzika kwazvo mumweya werudzi rwedu uye mumamiriyoni emoyo. Kuti tibatane, isu tinofanirwa kusimirana uye kubvuma kutya, kurwadziwa, uye kutsamwa kunogumburwa nenzira kwayo kuuraya kusina musoro kwaGeorge Floyd uye yakarebesa nhoroondo yekusarura.
Izvo zvakapfuura zvinorwadza zvichiripo nanhasi, kwete chete muchimiro chemhirizhonga, asi mune yezuva nezuva ruzivo rwekusarura kwakadzika. Isu tinozviona muhurongwa hwedu hwematsotsi, mune huwandu husingaenzanisike hwezvirwere munharaunda dzemavara, mu kusaenzana munzvimbo dzekuvakidzana nedzidzo dzinogamuchirwa nevana vedu. Nepo mitemo yedu ichinja, chokwadi ndechekuti dziviriro dzadzo hadzisi kushanda kwese kwese.
Nhasi, Apple iri kupa zvipo kumapoka akasiyana, kusanganisira iyo Fair Justice Initiative, sangano risiri purofiti rakazvipira kupokana nekusaruramisira kwemarudzi, kupedza kusungwa kwevanhu vazhinji, uye kuchengetedza kodzero dzevanhu vevanhu vanotambura kwazvo munharaunda yeAmerica. Kwemwedzi waChikumi, mipiro yevashandi ichave yakapetwa kaviri uye ichaitwa kuburikidza neBenevity.
Ino inguva apo vanhu vazhinji vangangoshuvira chero chinhu kunze kwekudzokera kuchinyakare, kana chinzvimbo chinogadzikana chete kana tikadzivisa kuona kwedu kwekusaruramisira. Kunyangwe zvingave zvakaoma kubvuma, icho chishuwo pachacho chiratidzo cheropafadzo. Rufu rwaGeorge Floyd rwunotyisa uye humbowo hunosuwisa hwekuti isu tinofanirwa kuvevarira kudarika ramangwana "rakajairika" uye kuvaka iyo inorarama kusvika kune akakwirira madiro ehumwe uye kururamisira.
Mumashoko aMartin Luther King, “Ruzhinji rwose rune vadziviriri vehunhu hwehukama nehukama hwevasina basa avo vanozivikanwa kuti vanorara kuburikidza nedzidziso dzehondo. Nhasi, kurarama kwedu kunoenderana nekwaniso yedu yekuramba takamuka, kujairana nepfungwa nyowani, kugara takamuka uye kusangana nedambudziko rekuchinja.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Tim Cook anotaura parufu rwaGeorge Floyd uye anozivisa zvimwe zvipo
Zvakare muna Chikumi unogona kudzosera mari kuApple Card